E nwere ọtụtụ ụdị nku anya. Ndị na-emepụta ihe na-ahọrọ akwa anya nke kwesịrị maka ụlọ ọrụ nke aka ha dịka ọnọdụ na mkpa ha si dị. N'ihi ụdị anya anya dị iche iche, ụfọdụ ịdọ aka na ntị abụghị otu na usoro ojiji. Taa, anyi ga ewebata ihe ndi choro ilebara anya anya.
A na-akwadebe ngwa ngwa anya nke ihe enyemaka mbụ nke usoro ịgba na usoro ịsacha anya. Ọ arụnyere ozugbo na ala maka ojiji.
Mgbe a na-efesa kemịkalụ na uwe ma ọ bụ n'ahụ nke ndị ọrụ ahụ, enwere ike iji sistemu ịgba nke ihe na-eme ka anya na-asacha, oge ịsa ahụ dịkarịa ala minit 15; Mgbe a na-efesa ihe ndị na-emerụ ahụ na anya, ihu, olu ma ọ bụ ogwe aka nke ndị ọrụ, enwere ike iji sistemụ anya nke ihe na-asacha ihu mee ihe maka iwepụ, oge iwepụ bụ ọ dịkarịa ala minit 15. A na-eji akwa ihe na-eme ka anya ghara iru anya Bohua, ọ bụghị naanị na-achọ ịdị ọcha, mana nwekwara ikike iguzogide nrụrụ.
Inye ihe enyemaka ihe mberede, nkwadebe nke atụmatụ nnapụta na mberede; Ma nhazi nke ụzọ mberede ahụ ọ dabara adaba ma dịkwa mma; Nyocha, mgbochi na njikwa nke ihe egwu dị n'akụkụ ọrụ ma ọ bụ usoro ọrụ.
Ekwesịrị ịdebe nlebara anya na ịdị mfe nke nrụnye. Tụkwasị obi n'oge eji, dị ka enweghị mmiri mmiri, wdg. Operability na usoro mmezi, mgbe akụkụ ndị dị mkpa dị ka valvụ bọl na eyewash chọrọ ka edochie ya, ọ kwesịrị ịdị mfe ịwepụ, dochie ma wụnye ya ọzọ, na mmezi ọnụ ala . Strong mgbe-sales ọrụ oru ike, nwere ike idozi nsogbu na a na-adọ na irè n'ụzọ.
Mgbe mmeghe anyị, ekwenyere m na ị nwekwara nghọta ụfọdụ banyere ịsa anya anya, yana ụfọdụ okwu chọrọ nlebara anya mgbe ị na-eji ya. Nabata ileta weebụsaịtị anyị, ekwenyere m na ị ga-eju anya